कांग्रेस कता जाला ? संविधानवाद कि अवसरवाद - Tanahun Awaj
Home समाचार	कांग्रेस कता जाला ? संविधानवाद कि अवसरवाद
31st December 2020 31st December 2020 53 views
दमौली/ पुष ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हठात प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पछि नेपाली जनमत दुइ पक्षमा बाँडिएको छ ।
एकथरी मानिसहरु ओलीको कदमलाई बाध्यताको उपज भनिरहेका छन् भने बहुमत मानिसहरु ओलीको यो कदमले लोकतन्त्र र नेपालको वर्तमान संविधान नै खतरामा परेको भनेर आलोचनामा उत्रेका छन् । यहि समयमा ओलीको यो कदमलाई कसरी लिन्छ र उसका आगामी दिनका कार्यक्रमहरु कस्ता हुन्छन् भनेर आम नागरिकले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसतर्फ नजर लगाइरहेका छन् ।
पुष ५ मै बसेको कांग्रेसका वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारीको वैठकले ओलीको कदमलाई संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित तथा प्रतिगामी कदम भएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो । तर ओली कदमको विरोध कुन रुपमा गर्ने भन्ने कुरामा कांग्रेसभित्र समान विचार पाइएको छैन । सभापति देउवा ओलीको कदमलाई प्रतिगामी भन्न तयार छन् तर प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापनलाई मुद्दा बनाएर आगामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन तयार छैनन् । उता विरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगाएतका नेताहरु संविधानवादको रक्षा गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनालाई प्रमुख मुद्दा बनाएर आन्दोलनका कार्यक्रम गर्नु पर्ने पक्षमा छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनका समर्थक लाई लाग्दैछ, अहिलको अवस्थामा चुनाव भए कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्नेछ । उनीहरुलाई लागको कुरामा सत्यता छ । यो बेला यदि निर्वाचन हुने हो भने कांग्रेसले बहुमत ल्याउन नसकेपनि ठूलो दल अवश्य बन्नेछ । कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेछ । तर प्रश्न कहाँ हो भने निर्वाचन भए न कांग्रेस ठूलो दल बन्ने हो । सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउने हो । हामीले निकट विगतमा अर्थात २०५८ मा देखे भोगेकै हौं, संसद विघटन भएपछि निर्वाचन हुन कति समय लाग्यो । नेपाली नागरिक र सिङ्गो राजनैतिक व्यवस्थाले कस्तो अवस्था झेल्नु प¥यो ।
सुनिँदैछ, प्रदेश १ मा संसद विघटनका पक्षधर मुख्यमन्त्री शेरधन राईको कुर्सी बचाउन कांग्रेस सहयोग गर्दैछ उता प्रदेश ३ मा भने पुनः स्थापनाका पक्षधर अष्टलक्ष्मीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गर्दैछ । यदि यो सत्य हो भने कांग्रेसलाई आम नागरिकले कसरी बुझ्ने ? यो भन्दा अराजनीतिक कुरा अरु के हुन सक्छ ? शेरधनलाई सहयोग गर्नुको अर्थ विघटनको समर्थन होइन ? अनि यसको अर्थ कांग्रेस अस्थिरताको समर्थक र नेपाली जनमतको अपमानको साक्षी बनेको भन्ने लाग्दैन ? आफैले बनाएको संविधानको रक्षा गर्नु साटो अवसरवादको दलदलमा फसेर व्यवस्था, संविधान र राष्ट्रको रक्षा गर्ने आफ्नो दायित्वबाट विमुख भएको भन्ने अर्थ लाग्दैन ?
प्रधानमन्त्री ओलीका व्यवहारहरु हेर्दा स्पष्ट हुन्छ, उनले चुनाव गराउने असल मनसायले मिति घोषणा गरेका होइनन् । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले द्विविधा त्यागेर, सत्ता मोह त्यागेर संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा र आम नेपाली मतदाताको मतको सम्मान गर्ने खालको कार्यक्रम मार्फत अगाडी बढ्नु उपयुक्त हुनेछ । संविधानवादको रक्षा हुन सके अहिले हारेको निर्वाचन अर्काे पटक जित्न सकिन्छ । अवसरबाद तर्फ लाग्ने हो भने तत्काल सत्ता प्राप्ती त होला तर सिंङ्गो व्यवस्था र नेपाली नागरिकको बेहाल हुनेछ । राष्ट्र र नागरिकको दीर्घकालिन हित रोज्ने वा क्षणिक लाभका लागि सत्ता प्राप्तको लोभमा अल्झिने ? त्यो निर्णय कांगे्रस नेतृत्वको हातमा छ । र अहिलको निर्णयले कांग्रेसको भविष्य पनि निर्धारण गर्ने छ ।